North West : Efa manana ny lamaodiny manokana
Vao teraka mihitsy i North West dia efa naharaka lamaody. Ny reniny rahateo isan’ireo « influenceuse » na olo-malaza be mpanaraka indrindra any anaty aterineto ka tsy manao ambanin-javatra izany fomba fiakanjo izany mihitsy.
Fanomezana isan’ny azony tamin’izany fotoana nahaterahany izany izao ny kiraro avy amin’ny marika « Givenchy », ny akanjo tohitena ho an’ny ankizy, ny servieta sy ny maro hafa. Mety misy fiantraikany aminy ihany ny fiakanjon’ny reniny, rehefa nihalehibe izy fa tsikaritra indrindra ny fironany any amin’ireo fomba fiakanjo nanazarana azy.
Efa mitentina any amin’ny 1 tapitrisa dolara any ho any izao ny fitambaran’ny akanjo sy kojakoja ananan’i North West, nefa izy vao enin-taona monja. Ny poketra kely entiny aza, izay marika malaza avokoa ny ankamaroany, dia tsy latsaky ny 800 tapitrisa dolara eo ho eo. Rehefa tiana tokoa aloha ny zanaka dia hikipiana.